ဘာကြောင့် မအောင်မြင်ရမှာလဲ… ? ? Why don't you succeed yet?? -
ယုံကြည်လိုက်ပါ – သင်လုပ်နိုင်ပါတယ် You Can Do It
ဘ၀မှာ အောင်မြင်ချင်တဲ့ အနာဂတ်လူငယ်တွေအတွက် လမ်းပြမြေပုံဖြစ်သလို၊ ဘ၀မှာ ကြိုးစားဖို့အတွက် စိတ်ဓါတ်ခွန်အားတွေဖြစ်ပါစေ။ I Can Do It (ဒီအရာတွေကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်)
ကျွန်တော့်ဘ၀ တိုးတက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ (ကြိုးစားပုံတွေ) အောင်မြင်မှုရဲ့ (လေ့လာတွေ့ရှိမှုတွေ) ကို
ယခုစာအုပ် Life Winning Management မှာ စုစည်းမှတ်တမ်းပြုစုပေးထားပါတယ်။
စာတွေသက်သက်မဟုတ်ပဲ၊ အတွေ့အကြုံ၊ အမှန်တရား၊ လက်တွေ့နည်းလမ်းတွေများစွာပါဝင်တာမို့
(ဘ၀ရဲ့ လက်စွဲစာအုပ်ကောင်း) ဖြစ်နိုင်ပါစေ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘ၀ အချိုးအကွေ့ဆိုနိုင်တဲ့ အလုပ်အတွေ့အကြုံများ
ကျွန်တော့်ဘ၀ အတွေ့အကြုံအရ -အမှားအမှန်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံဖူးရင် ပိုနားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ငယ်စဉ်အချိန်မှာ အတွေ့အကြုံရှာပါ၊ ဘ၀မှာ အတွေ့အကြုံဆိုတာ လူတွေကို ရင့်ကျင်မှုတွေ၊ စွမ်းရည်တွေ၊ ဖန်တီးမှုတွေကို ထုဆစ်ပေးနိုင်သော စွမ်းရည်တမျိုးပင်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် အလုပ်မှ သင်ယူလေ့လာခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံကောင်းတချို့
ကျွန်တော့်ဘ၀အတွေ့အကြုံအရ – အလုပ်ဆိုတာ လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို သင်ပေးနေတဲ့ ကျောင်းတော်ကြီးပါ၊ အလုပ်ကနေတဆင့် တိုးတက်ဖို့ ကျွမ်းကျင်မှုပေးတယ်၊ အမှား-အမှန်ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာရတယ်၊ ဘ၀တိုးတက်မှုရဲ့ လှေကားထစ်တွေပါပဲ။
ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ အပြောင်းအလဲဖြစ်စေခဲ့တဲ့ စွန့်စားမှုအတွေ့အကြုံများ
ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရ – ဘ၀ဆိုတာ စွန့်စားနေရခြင်းပါ၊ ဘ၀ကို ရင်ဆိုင်စိန်ခေါ်မှုနဲ့ ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါ အောင်ပွဲတွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်မှာပါ။ ဘ၀ရဲ့ အောင်မြင်ရဲ့ မှတ်တမ်းတွေကို ဖန်တီးဖို့ဆိုရင် ကြောက်စိတ်တွေကို စွန့်စားစိတ်ဖြစ်အောင် ဦးစွာပြောင်းလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ စင်္ကာပူမှာ အလုပ်တဖက် ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံများ
ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရ – ဘ၀ဆိုတာ မမြင်ရတဲ့ မနက်ဖြန်တွေကို လျှောက်လှမ်းနေရခြင်းပါ၊ (လမ်းမှန်) မိမိထင်သလို ဖြစ်လာနိုင်တယ်၊ (လမ်းမှား) မိမိထင်သလိုလည်း မဖြစ်လာနိုင်ဘူး၊ သို့သော်လည်း အရှုံးမပေးတဲ့ စိတ်နဲ့အတူ ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းနေခြင်းသာ ဘ၀ရဲ့အောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်ရောက်နိုင်ခြင်းပါပဲ။
ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ အလုပ် နဲ့ အချစ်ရေး ဒွန်တွဲလာမှု အတွေ့အကြုံများ
ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရ – အချစ် နဲ့ အလုပ် ဒွန်တွဲလာတဲ့အခါ (Heart နှလုံးသား + Head ဦးနှောက်) နှစ်ခုလုံးပေါင်းစပ် ဆုံးဖြတ်မှသာ မှန်ကန်တဲ့ ဘ၀ရဲ့ရလဒ်တွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်မှ တွန်းအားများများရှိလေလေ၊ ဘ၀ဆိုတာ အရှေ့ရေး ပိုမိုတိုးတက်လေလေပါပဲ။ တွန်းအားဆိုတာ ခွန်အားပါပဲ။
ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ စင်္ကာပူမှ ပြန်လာချိန် ဘ၀အချို့အကွေ့ အတွေ့အကြုံများ
ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရ – အခြေအနေတခုကို မဖြစ်မနေ ကျော်ဖြတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ – မဖြစ်မနေဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ကြိုးစားလိုက်ရင် အရာရာဟာ ဖန်တီးပြောင်းလဲယူနိုင်စွမ်းရှိနေပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ချေနည်းရင်တောင်မှ အလုပ်တခုခုကို စတင်လိုက်ပါ၊ လုပ်ရင်းနဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေများစွာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ Entrepreneur Life ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစတင်ခဲ့မှု အတွေ့အကြုံများ
ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရ – အများတွေ မလုပ်သေးတဲ့အချိန်၊ အများတွေ မလုပ်နိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာ အခွင့်အရေးများစွာ ရှိနေပါတယ်။ Do the First ပထမဆုံး လုပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အခွင့်အရေးဆိုတာလည်း ရှိနေရုံနဲ့ မရနိုင်ပါဘူး၊ ဖန်တီးကြိုးစားယူမှသာ ရနိုင်တဲ့သဘောပါပဲ။
ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ လုပ်ငန်းများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အတွေ့အကြုံများ
ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရ – ကျွမ်းကျင်တက်မြောက်မှုဟာ ၂၀ % အောင်မြင်မှုကို ဖန်တီးပေးပြီး ၊ ဘယ်လိုဖန်တီးပုံဖော်မလဲဆို တဲ့ မဟာဗျူဟာက ၈၀ % သော တိုးတက်မှုကို ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။
ကျွန်တော် လုပ်ငန်းများတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု အတွေ့အကြုံများ
ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရ – လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ အခြေခံအချက် (၃-ချက်) ရှိပါတယ်။ Start စတင်ဖုိ့လိုအပ်တယ်၊ တိုးတက်လာတဲ့အခါ System စနစ်နဲ့ ထိန်းနိုင်ဖို့နဲ့ အောင်မြင်လာတဲ့အခါ Sustain ရေရှည်ထိန်းသိမ်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ မြို့ပေါင်း (၂၀-ကျော်) အထိ လုပ်ငန်းဦးဆောင်ခဲ့မှု အတွေ့အကြုံများ
ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရ – အောင်မြင်သူတွေဆိုတာ Zero to Hero ကြိုးစားနိုင်သူတွေပါ အောင်မြင်ဖို့အတွက် အောင်မြင်တဲ့သူတွေကို စံနမူနာထားပါ၊ သူတို့ရဲ့ ကြိုးစားပုံတွေကို အတုယူကြိုးစားကြည့်ပါ။ တနေ့မှာ ကိုယ်လည်း သူတို့သကဲ့သို့ အောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်။
MESI သင်တန်းကျောင်း (မီလျံနာ) လုပ်ငန်းစု ဖြစ်နိုင်ရေး မျှော်မှန်းကြိုးစားမှုများ
ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရ – မအောင်မြင်ခင်မှာတော့ မိမိကိုယ်တိုင် တိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ ကြိုးစားရသလို၊ အောင်မြင်တိုးတက်လာချိန်မှာတော့ အများအတွက် တိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ ကူညီပေးရင်းအောင်မြင်တိုးတက်မှုတွေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၁၀-နှစ်) ဆိုတဲ့ အချိန်တွေမှာ
အဆိုးတလှည့် – အကောင်းတလှည့်ပါပဲ
အောင်မြင်တလှည့် – ကျရှုံးတလှည့်ပါပဲ
ဘ၀ဆိုတာ (အပြေးပြိုင်ပွဲလိုပဲ) စတင်ပြေးဖို့ အရေးကြီးတယ် – သို့သော် လမ်းတ၀တ်မှာ အရှုံးမပေးဖို့နဲ့ နောက်ဆုံး ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိ အရောက်ပြေးနိုင်မှ (အောင်မြင်မှု) ဆိုတာ ခံစားနိုင်ပါတယ်။
* * * * * တချိန်က ညနက် (၂ နာရီ) အထိ Part-time လုပ် ပိုက်ဆံစုရင်း
စင်္ကာပူမှာ ကျောင်းတက်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားပညာရေးကို လေ့လာခဲ့ရပေမဲ့ . . . . .
နိုင်ငံခြားက ခဏတာအပင်ပန်းခံခဲ့ရတဲ့ အဲ့ဒီပညာတွေနဲ့
ယခုအချိန်မှာ MESI ဆိုတဲ့ သင်တန်းကျောင်းကို ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပြီ။
* * * * * တချန်တုန်းက ဆရာပေါက်စ ကျောင်းတချို့မှာ အလုပ်ရှာတော့
မင်းမှာအရည်အချင်းရှိလို့လားဆိုတဲ့ အထင်သေးခံရပေမဲ့ . . . .
အခုအချိန်မှာ လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ မန်နေဂျာတွေနဲ့အတူ
လူပေါင်းသောင်းနဲ့ချီ စာသင်ပေးနိုင်တဲ့ ပညာရှင်ဘ၀ကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီ။
* * * * * တချိန်က ငွေမရှိလို့ Laptop လေး ရောင်းပြီး
ကိုယ်ချစ်တဲ့ အလုပ်တွေကို မရဲမ၀င့်ကြိုးစားခဲ့ရပေမဲ့. . . . .
အခုချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လုပ်ငန်းခွဲများ ထူထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့
ယခင် (၁၀-နှစ်) က
လူမသိ သူမသိ ကျွန်တော်ပါ
ယခု (၁၀-နှစ်) မှာ လူပေါင်း သောင်းချီသိခဲ့ပြီ
နောင် (၁၀-နှစ်) မှာ ဒီထက် ပိုအောင်မြင်နိုင်ဖို့ ယုံကြည်ကြိုးစားလျှက်ပါ။
အလုပ်မရှိ – ငွေမရှိ ကျွန်တော်ပါ
ယခု (၁၀-နှစ်) မှာ အလုပ်များစွာ ငွေများစွာရှာနိုင်ခဲ့ပြီ
Good Work is Good Luck လို့ ခံယူစေချင်ပါတယ်၊
Hard Luck for Hard Work ကံဆိုးနေတယ်ဆိုရင်တောင်မှ
ယနေ့ကျရှုံးခဲ့ရင်တောင် – မနက်ဖြန်ဆိုတာ အခွင့်အရေးရှိတယ်။ နောက်တလ ဆက်ပြီး ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။
သေချာတာတော့ နောင် ၁၀ နှစ်ဆိုရင် အရာရာဟာ သင်လိုချင်တဲ့အခြေအနေတခုတော့ရှိနေမှာပါ။
အားလုံးရဲ့ ဘ၀တွေ တိုးတက်အောင်မြင်ရေးအတွက်
သုသေသပြု ရေးသားစုစည်းထားတဲ့ (ယခုစာအုပ်မှာ)…
ဘ၀ဆိုတာ (ယခု ၈ ချက်) နဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဖော်ထားတယ်။
1. Work & Career (အလုပ်နှင့် အသက်မွေးဝမ်း)
2. Income & Business (၀င်ငွေနှင့် စီးပွားရေး)
3. Social & Relationship (လူမှုရေးနှင့် ပေါင်းသင်းမှု)
4. Success & Development (တိုးတက်မှုနှင့် အောင်မြင်ရေး)
5. Knowledge & Spiritual (အသိပညာနှင့် ဘာသာတရား)
6. Health & Physiological (ကျန်းမာရေးနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ)
7. Family & Friend (မိသားစုနှင့် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း)
8. Recreation & Happiness (အပန်းဖြေမှုနှင့် ပျော်ရွှင်စိတ်ကျေနပ်မှု)
ဘ၀ရဲ့ ဒေါက်တိုင်တွေဖြစ်တဲ့ အချက် (၈-ခု)
(၁) ဘ၀အောင်မြင်တိုးတက်မှုကို ဖန်တီးပေးနေတဲ့
(Goal – ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်)
(၂) ဘ၀အောင်မြင်တိုးတက်မှု ဖန်တီးပေးနေတဲ့
(Quotient – စွမ်းရည်သတ္တိ)
(၃) ဘ၀အောင်မြင်တိုးတက်မှု ဖန်တီးပေးနေတဲ့
(Strategy – မဟာဗျူဟာ)
(၄) ဘ၀အောင်မြင်တိုးတက်မှု ဖန်တီးပေးနေတဲ့
(Action – လက်တွေ့ကြိုးစားမှု)
(၅) ဘ၀အောင်မြင်တိုးတက်မှု ဖန်တီးပေးနေတဲ့
(Responsibility – တာဝန်ယူမှု တာဝန်သိမှု)
(၆) ဘ၀အောင်မြင်တိုးတက်မှု ဖန်တီးပေးနေတဲ့
(Discipline – စည်းကမ်းစနစ်)
(၇) ဘ၀အောင်မြင်တိုးတက်မှု ဖန်တီးပေးနေတဲ့
(Timebound – အချိန်ကာလ)
(၈) ဘ၀အောင်မြင်တိုးတက်မှု ဖန်တီးပေးနေတဲ့
(Complement – ပြီးမြောက်မှု)
ဘ၀ရဲ့ အောင်မြင်တိုးတက်လာမှု Level (ဇုံ – ၃ ဇုံ)
သာမန်ဘ၀ပုံစံ Level (1) အဆင့်
Comfort Zone စွန့်စားမှုမရှိ သက်သာမှု ဇုံ
တိုးတက်သော ဘ၀ပုံစံ Level (5)
အဆင့် Success Zone အောင်မြင်တိုးတက်သော ဇုံ
အမြင့်ဆုံးသော ဘ၀ပုံစံ Level (10) အဆင့်
Freedom Zone လွတ်မြောက်မှု ဇုံ
ဘ၀ရဲ့အရာရာကို ဖန်တီးပေးနေတဲ့ (ဗဟိုချက် – ၄ ခု)
– ဘ၀ကို တန်ဖိုးထားလေလေ တိုးတက်လေလေပါပဲ
– ဖြစ်ချင်တာကို ယုံကြည်လေလေ ဖြစ်အောင်လုပ်လေလေပါပဲ
– မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်မှုဖြစ်လေလေ – ဘ၀တိုးတက်လေလေပါပဲ
– စိတ်ဆန္ဒကြီးလေလေ – ပိုမိုကြိုးစားဆောင်ရွက်လေလေ – တိုးတက်လေလေပါပဲ။
ကျွန်တော် (၁-နှစ်) အတွင်းမှာ လူမှုဘ၀တွေကို သုသေသနပြု ရေးသားထားပြီး (ဘ၀အောင်မြင်ရေး လမ်းပြပုံစံ)
ကိုယ်တိုင်သာ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ အရှင်သခင် ဦးဆောင်ဖန်တီးသူသာဖြစ်ပါတယ်။
ဘ၀မှာ လုပ်ချင်တဲ့ အရာတွေကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပြီး၊ ဘ၀ကို အကောင်းဆုံး တည်ဆောက်သွားရမှာဖြစ်တယ်။
ဤအရာတွေကို လုပ်နိုင်တယ် ယုံကြည်နေဖို့ပါ။
You Can Do It – I Can Do It
တခြားသူတွေ လုပ်နိုင်ရင် – ငါလုပ်နိုင်တယ် ယုံကြည်နေဖို့ပါ။
ယုံကြည်နေမှုနဲ့ စိတ်ဆန္ဒရှိမှုနဲ့ ခရီးဆက်နေပါ။
တနေ့မှာ သေချာပါတယ် (အောင်မြင်မှာပါ)
I Believe – I Can Do It 🙂
ကျွန်တော်ရဲ့ အောင်မြင်ခဲ့မှုအတွက် အားလုံးသော ကျေးဇူးရှိသူတွေအတွက် (ဒီစာအုပ်ဖြင့် လှူဒါန်းထုတ်ဝေ) ရင်းဖြင့်…..
ကျွန်တော်ရဲ့ မွေးနေ့ (ဖေဖော်ဝါရီ – ၂၈) မတိုင်ခင်မှာ စာအုပ်ထွက်ရှိပါမည်ဖြစ်ကြောင်း အားလုံးအတွက် အားပေးရင်း…
အားလုံးရဲ့ ဘ၀တွေ တိုးတက်အောင်မြင်ပါစေ
ဇင်ဖြိုးပိုင် (MESI Institute)
တခြားသူလုပ်နိုင်ရင် – သင်လုပ်နိုင်ပါတယ် ယုံကြည်နေပါ